Miyuu Hazard qeyb ka noqon doonaa kulanka El Clasico ee Barcelona? – Gool FM - Idman news
(Madrid) 21 Okt 2021. Inta badan warbaahinta Spain ayaa maanta oo khamiis ah qortay in ciyaaryahanka reer Belgium iyo kooxda Real Madrid ee Eden Hazard uu qeyb ka noqon doono Liiska xiddigaha Los Blancos ee ka qeyb galaya kulanka El Clasico ee Barcelona.
Tani waxay timid kaddib markii ciyaaryahanka uu saaxiibadiis kooxda kala qeyb qaatay tababarka maanta, ay ugu diyaar garoobayeen kulanka El Clasico ee Barcelona ay kula ciyaari doonaan garoonka Camp Nou, isaga oo aan wax dhibaato ah qabin.
Wali lama oga in tababaraha reer Talyaani iyo kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti uu Hazard ku soo bilaabi doono kulanka Barcelona iyo in kale, inkastoo ciyaaryahanka uu dareemayo fiicnaan iyo inuu diyaar u yahay inuu ciyaaro.
Saxafiga reer Spain ee Mario Cortegana, oo ka tirsan shabakadda Goal, ayaa sharraxay in go’aanka uu kaga qeyb galayo Eden Hazard kulanka El Clasico ay ku jirto gacanta tababare Carlo Ancelotti, haddii uu ku soo bilaanayo ama haddii kursiga keydka la dhigayo, ama xitaa haddii ay ku filan tahay inuu kaliy qeyb ka noqdo liiska xiddigaha Los Blancos ee ku sugnaan doono garoonka Camp Nou.
Ancelotti ayaa qaadan doona go’aanka uu kaga qeyb galaya Hazard kulanka El Clasico, isagoo la tashanaya shaqaalaha caafimaadka ee Real Madrid, inta lagu jiro tababarka labada maalmood ee soo socota, iyo kahor bilowga kulanka la wada sugayo.
Previous Jordi Alba oo ka dhaawacmay Barcelona… (Miyuu seegi doonaa kulanka El Clasico?) – Gool FM
Next Ancelotti oo sheegay furaha ay Real Madrid kaga guuleysan karto Barcelona kulanka El Clasico – Gool FM
Barnaamijka Kulanka KNN (01-12-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Barnaamijka Kulanka KNN (01-12-2021) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia December 1, 2021